Madaxwaynihii hore Baraaziil Lula da Silva oo xabsi la dhigay – Radio Daljir
Madaxwaynihii hore Baraaziil Lula da Silva oo xabsi la dhigay
Abriil 8, 2018 5:46 b 0
Madaxwaynihii hore Brazil Luiz Inacio “Lula” da Silva ayaa isku dhiibay ciidamada booliska ee dalkaasi, isagoo ay u bilaaban doonto 12-sano oo xabsi, kadib markii lagu helay musuqmaasuq.
72-sano jirkan ka tirsan xibiga bidix ee dalkaasi ayaa laga qabtay dhisme ku yaala na waaxiga magaalada warshadaha leh ee Sao Paulo, waxaana lagu qaaday gaari madow oo ay boolisku leeyihiin, sida uu sheegay muuq baahiyaha Globo TV.
Isku dayo horay oo ciidamadu ay isku dayayeen inay ku xiraan ayaa waxaa hareeyey dibadbaxyo ay dhigayeen taageerayaashiisa oo si’aad ah u diidan in la xiro, kuwaasi oo horay u xiray irdaha laga baxo dhismaha uu daganaa.
Lula ayaa hadda la filayaa in loo duuliyo magaalada kutaala koonfurta Brazil ee Curitiba si’ay ugu bilaabato xukunkiisa, waxaana loo sameeyey xabsi si gaar ah loogu naqshadeeyey, isagoona ku tilmaamay xukunkiisa inuu yahay mid siyaasadaysan oo ay dhabarka ka riixayaan kooxaha midigta, kuwaasi oo doonaya inay ka baajiyaan doorashada October ee dalka Barazil la filayo inay ka dhacdo.
Hogaamiyahan oo xukunka Barazil soo qabtay laba jeer sanadkii 2003dii ilaa 2011kii ayaa lagu soo oogay inuu iibsanayay dhul xeebta dhankiisa oo ku yaala wadanka Barzil, arrintaasi oo lagu sheegay mid musuqmaasuq ahaa.
70-Qof oo wadanka Suuriya ugu geeriyooday weerar gaas loo adeegsaday (sawiro)